आफ्नै छोरी हाकिम भएर आएपछि एक प्रहरी अधिकृतले छोरीलाई सलाम गरेको तस्वीर भाइरल, यस्तो छ वास्तविकता « गोर्खाली खबर डटकम
आफ्नै छोरी हाकिम भएर आएपछि एक प्रहरी अधिकृतले छोरीलाई सलाम गरेको तस्वीर भाइरल, यस्तो छ वास्तविकता
भारतमा अहिले एक तस्वीर खुव सेयर भै रहेको छ । उक्त तस्वीरमा एक बाबु आफ्नी छोरीलाई सलाम गरिरहेका छन् । बाबुको अनुहार चम्किलो देखिन्छ भने छोरी पनि मुस्कुराई रहेकी छिन् ।
यो तस्वीरको एक छुट्टै कथा छ यो तस्वीर भारतको हो । आन्ध्र प्रदेशमा एक सर्कल निरीक्षक श्री वाई श्याम सुन्दरले उनकी छोरी सुश्री येन्द्लुरु जेसी प्रशान्तीलाई सलाम गरेका हुन् ।
उनकी छोरी अहिले गुन्टूर जिल्लाको प्रहरी उपरीक्षकको रूपमा कार्यरत छन् । छोरी उपरिक्षक भएपछि पहिलो पटक बाबु छोरीको भेट भयो र बाबुले आफ्नो हाकिम भएर आएकी छोरीलाई सलाम गरे ।
एक आइपिएस अफिसर प्रियंका शुक्लाले उक्त तस्वीर ट्वीटरमा पहिलो पटक सेयर गरेकी थिइन् ।
आततककी उस सम्पादक चित्रा त्रिपाठीले उक्त ट्वीट सेयर गरकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, यो फोटो पुरुष मानसिकताहरुका लागि पनि एक चोट हो, जो छोरा भन्दा छोरी कमजोर हो भन्ने सोचेरघर भित्रै राख्न चाहन्छन् ।
यो पनिपढ़नु होस:एउटा रोचक घटना बाहिरिएको छ । नाइजेरियाका प्रिटी माइक नामक एक पुरुषले एकसाथ आफ्ना ६ जना प्रेमिकालाई गर्भवती बनाएका छन् ।उनी जहाँ जान्छन् विवाद उनीसँगै उब्जिन्छ । उनी स्टन्टका राजा भन्ने उपनामले पनि परिचित छन् ।
उनको खास नाम माइक इजी न्वाली न्ओगु हो । गत नोभेम्बरमा अभिनेता विलियम्बस उचेम्बोको विवाह समारोहमा उनले आफ्ना ६ जना गर्भवती प्रेमिकालाई सँगै लगेपछि यो बिषयले निकै चर्चा पायो । विवाह समारोहमा आफुसँगै लगेका ६ जना गर्भवती प्रेमिकाको गर्भावस्थाको पेट उनले सुम्सुम्याएको तस्वीर निकै भाइरल बनेको थियो ।
यी नाइजेरियन प्ले ब्वायले लागोस नाइट क्लब सञ्चालन गर्दछन् । उनी निकै धनी छन् र पैसा पनि मनग्गे खर्च
उनले आफू र आफ्ना ६ गर्भवती प्रेमिकाको तस्वीर इन्स्टाग्राममा पोष्ट गर्दै आफूहरु निकै उत्कृष्ट जीवन बिताइरहेको बताएका छन् ।
यी नाइजेरियन प्ले ब्वायले लागोस नाइट क्लब सञ्चालन गर्दछन् । उनी निकै धनी छन् र पैसा पनि मनग्गे खर्च गर्दछन् । साथै उनले निकै महंगा ब्राण्डका कपडाहरु प्रयोग गर्नुका साथै सुपर कारहरु चढ्दछन् । जसका कारण युवतीहरू उनिसँग युवतीहरू नजिकिन्छन् ।
केही वर्षअघि नाइजेरियाको राजधानीको सडकमा केटीहरुलाई कुकुरजस्तै घुँडा टेकाएर परेड खेलाएको आ-रोपमा उनी पक्राउ परेका थिए । एजेन्सी
सुपरमार्केट भित्र प्रवेश गरि विशालकाय छेपारोले मचाए हंगामा !! भाइरल भिडियो सहित ।
१० वर्षको वच्चाको हरेक महिनाको आम्दानी १८ करोड !!!
आफ्नो मालिकको मृत्यु हुने थाहा पाएपछि अन्तिम पटक अस्पतालमा पुगेर कुकुरले ‘गुड बाइ’ गरे संगै मालिकको पनि मृत्यु (भिडियो)